Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Matahotra ny karazany COVID-19 amin'ny fahalavoana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Matahotra ny karazana COVID-19
Ny Institute of Health (HIH) any Italia dia mampiakatra fanairana raha mbola ambany ny tarehimarika hopitaly. Ny isan-jaton'ny tranga miabo dia miteraka tahotra ny fiovaovan'ny COVID-19 Kappa sy ny Delta, ny ankamaroany dia izay nisondrotra tamin'ny 5.2 isan-jato tamin'ny Mey ka hatramin'ny 27.7 isan-jato Jona.
Tatitra vaovao iray avy amin'ny HIH momba ny fanaparitahana ireo variants dia miantso ny “fiheverana lehibe” mba homena ny fivezivezena amin'ireo karazana areti-mifindra kokoa.
Vaksinina fahatelo no aroso hiadiana amin'ireo fiovan'ny COVID-19.
Amin'ny volana oktobra dia hisy fitomboana indray ny fivezivezivezy virosy, hafa noho ny taona 2020, ary indrindra ireo izay mbola tsy vita vaksiny dia hiafara amin'ny fikarakarana mafy.
"Ny fatra fahatelo amin'ny vaksinina dia ao anaty tolo-kevitra, saingy tsy fantatsika hoe oviana sy ho an'iza," hoy ny Tale jeneralin'ny fisorohana ny minisiteran'ny fahasalamana any Italia, Gianni Rezza.
"Ny vaksiny fahatelo manohitra ny COVID-19 dia dinihina, na dia mbola tsy fantatsika hoe rahoviana, amin'ny fomba ahoana ary ho an'iza," hoy i Rezza nanazava nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety momba ny fanaraha-maso ny data momba ny fanaraha-maso ny faritra COVID-19.
"Amin'ny volana oktobra dia hisy fitomboana indray ny fivezivezivezy virtoaly, tsy mitovy amin'ny taona 2020, ary ireo izay mbola tsy nanao vaksiny dia hiafara amin'ny fikarakarana mafy", hoy ny Undersecretary for Health, Pierpaolo Sileri. “Ny loza mety hitranga dia ny fihanaky ny viriosy amin'ireo zaza tsy voadinika sy [ireo] mihoatra ny 60 taona, ary atahorana hiafara amin'ny fitsaboana mafy ity farany. Toa hadalana amiko ihany ny fahafatesan'ny vaksinin'ny coronavirus. Manana fitaovam-piadiana hialana amin'ny fahafatesan'ny tamin'ny taon-dasa isika. ”
Delta Variant: Zavatra tokony ho fantatra
Ny variana Delta, izay manana enta-mavesatry ny virus 60 isan-jato mahery noho ny aretina hafa, dia mitombo ihany koa any Italia araka ny angon-drakitra navoakan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Ivon-toerana ambony momba ny fahasalamana amin'ny fanaraha-maso isan-kerinandro.